बलियो बन्ने दाउमा देउवा, पुराना नेताले भने, ‘पदका लागि जुवा नखेल्नुस्’ – Rajdhani Daily
बलियो बन्ने दाउमा देउवा, पुराना नेताले भने, ‘पदका लागि जुवा नखेल्नुस्’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकपछि अर्को रणनीतिसहित आगामी महासमिति हुँदै १४औं महाधिवेशनमा अझै सशक्त बन्ने तयारीमा छन् । सो तयारीअनुरूप नै हेटौंडा जिल्ला सभापतिको भेलालाई सहज अवतरण गराएका देउवाले पछिल्लो समय कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढिरहेका छन् । तर, कांग्रेसका पुराना नेताले भने सभापति देउवालाई पदको स्वार्थका लागि जुवा नखेल्न सुझाएका छन् ।
सोमबार महामन्त्री शशांक कोइरालाको पहलमा नेता डा. नारायण खड्काले राजधानीको लैनचौरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका पुराना नेताले पार्टीलाई धरापमा पारेर भन्दा जोगाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाएका हुन् । पुराना कांग्रेस नेता विपिन कोइरालाले पार्टी भागबन्डाबाट अघि बढिरहेका कारण जनताका बीचमा रहेको विश्वासबाट खस्कँदै गएको बताए ।
उनले भने, ‘पार्टीलाई अंशबन्डा लाउने काम बढी भयो । जनताले विश्वास गर्न छाडे । पदको स्वार्थका लागि कांग्रेसलाई जुवा खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन । पार्टीलाई जुवा थाप्न बन्द गर्नुस्, तपाईं सभापति भइसक्नुभो । अब के हुने ?’
उनले पार्टीका शीर्ष भनिएका नेताप्रति आक्रामक हुँदै भने, ‘कांग्रेसलाई तपाईंहरूले केही नदिने, तपाईंहरूलाई कांग्रेसले सधैं दिइरहनुपर्ने ?’
अर्का पुराना नेता विनयध्वज चन्दले बीपीको नाम भजाएर पार्टी नचल्ने भन्दै नेताको चरित्र सुधार्नुपर्ने बताए । ‘बीपीको नाम भजाएर पार्टी कहिलेसम्म चल्छ ? चितवनमा हसिया हथौडामा भोट हाल्न लाउने, हेटौंडामा कमल थापालाई भोट माग्ने अनि बीपी बीपी भनेर पार्टी चल्छ ?’ चन्दले नेतृत्वप्रति व्यंग्य गर्दै भने ।
उनले पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढेको भन्दै पार्टी नेतृत्व नै अनुशासनमा नबसेसम्म पार्टी नसुध्रिने धारणा राखे । अर्का नेता तीर्थराम डंगोलले नेताका छोरालाई नेता मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण कांग्रेस धरापमा पर्दै गएको बताए । कांग्रेसभित्र वर्तमान अवस्थामा पनि नेताको छोरो नेता हुने कि जनताको छोरो नेता हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए । ‘कांग्रेसभित्र नेताहरू अपुताली खाने दाउमा छन् । राजाको छोरोलाई राजा मान्न सकिन्नँ भनेर गणतन्त्र ल्याउने अनि नेताको छोरालाई नेता मान्नुपर्ने ?’ डंगोलले भने ।
अर्का वक्ता लोकेश ढकालले वर्तमान पार्टीको केन्द्रीय समिति इतिहासकै निकम्मा भएको भन्दै पार्टी कार्यालय मुर्दाघरजस्तो भएको बताए । ‘केन्द्रीय समिति इतिहासकै निकम्मा भएको छ, पार्टी कार्यालय मुर्दाघरजस्तो देखिन्छ । सभापतिज्यू तपाईंलाई कहाँ भेट हुन्छ, कार्यकर्ता कहाँ भेट्न आउनुपर्ने हो ?’ उनले थपे, ‘नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद भोट केमा हसिया हथौडामा भनेर पार्टी बलियो हुन्छ ? अनि चुनाव कसरी जितिन्छ ? ।’
अर्का नेता ओमकार श्रेष्ठले तल्लो तहका नेतालाई पार्टीको चिन्ता रहेको तर पार्टीको नेतृत्वमा रहेकालाई पार्टीको भन्दा पदको र गुटको चिन्ता रहेको जनाए ।
नेता गोविन्दराज जोशीले पार्टीभित्र टिकट वितरणको समयमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पहिलोपटक टिकट माग्दा पाइनँ । त्यो टिकट ६० लाखमा बिक्यो । अहिलेको ४ करोडमा बिक्यो होला, होइन ?’
जोशीले नेताको दम्भका कारण पार्टीको अवस्था बिग्रिन पुगेको धारणा राखे । कार्यक्रममा पुराना नेता दामोदर गौतम, चिरञ्जीवी वाग्ले, हिरादत्त भट्ट, तिलकप्रसाद न्यौपाने, रामबहादुर गुरुङलगायतले पार्टीमा संघर्ष गरेका पुराना कार्यकर्तालाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै जिम्मेवारी नदिएको गुनासो पोखेका हुन् ।
उनीहरूले पार्टी सरकारमा हुँदा भएको प्रधानन्यायाधीश प्रकरण र आईजीपी प्रकरण हारको अर्को कारण भएको समेत आरोप लगाए ।
सबै पुराना नेताको बोल्ने क्रम सकिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको धारणालाई समेट्दै जवाफ दिए ।
निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा गल्ती भएको भन्दै देउवाले जिल्लाको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दा धेरै स्थानमा उम्मेदवारहरू पराजित हुने पुगेको स्वीकार गरेका हुन् ।
सभापति देउवाले टिकट पाएकालाई समेत नपाएकाहरूले हराउन लागेका कारण पनि कतिपय जित्ने उम्मेदवारले समेत हार बेहार्नुपरेको बताए । ‘टिकट दिँदा जिल्लाको अधिकार खोसियो । त्यहाँ गल्ती भयो तर टिकट पाएकालाई नपाएकाहरूले हराउन लागे, त्यहाँ अर्को गल्ती भयो,’ देउवाले भने, ‘कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई हराउनदेखि सुरु भएको अन्तर्घात अझै रोकिएन । पार्टी सुध्रिन्छ, अन्तर्घात रोकौं ।’
देउवाले बितेका कुरा छाडेर पार्टीलाई सबैले एक बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफूलाई सभापतिसँग मिल्यो भन्ने आरोप लगाइएको बताए ।
‘पार्टीभित्र कहाँ कहाँ भ्वाङ परेको छ, टालौं भन्दा सभापतिसँग मिल्यो भन्छन्,’ उनले भने, ‘बीपी गणेशमान, सुवर्णशमशेर, किसुनजीका पालामा पनि गुट थियो तर चरित्र ठीक थियो ।’ उनले मेरो गुट बलियो भयो कि भएन भन्नु भन्दा पार्टी बलियो भयो कि भएन भन्ने चिन्ताले मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दै सबैले पार्टी बलियो बनाउनतर्फ सोच्नुपर्ने बताएका हुन् । महामन्त्री कोइरालाले भने बोल्न चाहेनन् । यस्तै, कार्यक्रममा प्रकाशमान सिंह भने सहभागी नै भएनन् ।
कार्यक्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महतलगायत सहभागी थिए ।
एकता भंग होला: गच्छदार
कार्यक्रममा नेता विजयकुमार गच्छदारले पार्टी एकता गर्दा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे पार्टी एकता भंग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले एकतापछि आफ्ना नेता कार्यकर्ताको अवस्थाका विषयमा पार्टी नेतृत्वले ध्यान नदिएको र अपमान गरिएको भन्दै देशभरका नेता कार्यकर्ता उतारेर पार्टी एकता भंग भएको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
‘मैले कांग्रेस बलियो बनाउन पार्टीलाई एकता गराएको हुँ । एकलौटी निर्णय गरेर नै पार्टी एकता गराएँ तर आज आमकार्यकर्तामाथि अपमान भएको छ । एकता भंग गर्नु नपरोस्,’ गच्छदारले भने ।
उनले गुट र उपगुटमा विभाजित कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई सामना गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे । गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र कांग्रेसबीच गत २१ मा पार्टी एकता भएको थियो ।